Magacyada iyo beelaha 10 xildhibaan oo maanta la doortay | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Magacyada iyo beelaha 10 xildhibaan oo maanta la doortay
Magacyada iyo beelaha 10 xildhibaan oo maanta la doortay
Muqdisho (Dalkaan.com) – Waxaa weli dalka kasii socota doorashada Golaha Shacabka, ayada oo maanta la doortay xildhibaano dhowr ah, kuwaasi oo doorashadooda ka dhacday magaalooyinka Muqdisho, Dhuusamareeb iyo Garoowe.
Doorashada lagu qabtay Muqdisho oo aheyd kuraasta gobollada waqooyi, ayaa waxaa maanta lagu doortay saddex xildhibaan, kuwaasi oo aan gelin dhamaantood wax loolan ah, loona tanaasulay, islamarkaana ku soo baxay codeyn gacan taag ah.
Hoos ka aqriso magacyada Xildhibaanada iyo beelaha ay kasoo jeedaan:
1. Siciid Maxamed Maxamuud, (Muuse Dhariyo), HOP244
2. Ifraax Maxamed Cawad (Habar-jeclo, Isaaq, Dir), HOP037
3. Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir (Habar-jeclo, Isaaq, Dir), HOP238
Dhuusamareeb: doorashada ayaa waxaa kusoo baxay saddex xildhibaan, kuwaasi oo musharaxiintii kala kaga adkaaday tartanka. Hoos ka aqriso magacyada iyo beelaha ay kasoo jeedan:
1. Saadaq Cumar Xasan “Saadaq John” – (Saleebaan, Habar-gidir, Hawiye), HOP248
2. Maxamed Ibraahim Cali “Maxamed Cajiib” – (Waceysle, Abgaal, Hawiye), HOP064
3. Qaali Axmed Diiriye (Aarsade, Duduble, Hawiye), HOP096
Sidoo kale magaalada Garoowe ee caasimada maamulka Puntland ayaa waxaa lagu doortay Afar xildhibaan, kuwaasi oo kuraastooda kala ahaa HOP#128, HOP#223, HOP#232 iyo HOP#144. Hoos ka aqriso magacyada xildhibaada kusoo baxay iyo beelaha ay kasoo jeedaan:
1. Maxamed Cabdiraxmaan Xayle – (Carab Salax), HOP128
2. Xirsi Jaamac Gaani – (Awrtable, Daarood), HOP223
3. Fardowsa Ismaaciil Cigaal – (Leelkase, Daarood), HOP232
4. Cabdiqafaar Cilmi Xaange – (Majeerteen, Baciid-yahan), HOP144
Doorashada Golaha Shacabka ayaa haatan si dardar leh uga socota maamul goboleedyada iyo Muqdisho, waxaana sida qorshaha yahay in la soo gaba-gabeeyo 25-ka bisha Febraayo.
Si kastaba, Soomaaliya ayaa ku daahday xaaladda adag ee kala guurka ah, kadib is qab-qabsiyo xoogan oo hareeyey hannaanka doorashooyinka dalka, kuwaasi oo dhowr jeer dib u dhigay jadwalada doorashada.
Marco Silva oo Xaqiijiyay in Fabio Carvalho uu ka tagi...
Tababaraha Fulham Marco Silva ayaa xaqiijiyay in daafaca da’da yar ee Fabio Carvalho uu ka tagi doono kooxda ka hor inta uusan xagaaga u wareegin Liverpool . Intii lagu guda jiray...
Real Madrid oo aan ka walaacsaneen wararka heshiis kordhinta ee Kylian...
Xildhibaanada Jubaland Iyo Puntland oo Qeyb Weyn Ka qaatay Guushii Xasan...
Paris Saint-Germain oo ah kooxda ugu cad cad Saxiixa Cristiano Ronaldo.
Gaari ay la socdeen wariyeyaal iyo askar oo lagu qarxiyey HIIRAAN...
Guddiga xalinta Khilaafka doorashada oo sheegay in shaqadooda ay halis ku...
Daawo: JANAN oo wax aan la aqbali karin ku tilmaamay ‘tallaabo...
Xog: Kulan Villa Somalia uga socda madaxweyne Farmaajo iyo Jeneraal Saadaq...